चाडै थकाई लाग्नुका कारण र त्यसको समधान - ज्ञानविज्ञान
सानोतिनो काम गर्दा वा सामान्य अवस्थामा पनि थकाई बढी अनुभव हुन्छ ? त्यसो हो भने, यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । किनभने, सामान्य जस्तो लाग्ने यो लक्षणले अन्तत शरीरमा रगतको मात्रा कम हुँदै जान्छ र एनिमिया निम्त्याउन सक्छ ।
शरीरलाई दुरुस्त राख्न आइरनको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । खासमा हेमोग्लोबिनको सबैभन्दा जूरी तत्व्का रुपमा आइरनले सिंगो शरीरमा अक्सिजन पुर्‍याउने काम गर्छ । शरीरका हरेक कोषलाई शक्ति प्राप्त गर्नका लागि अक्सिजनको आवश्यकता हून्छ र यो आवश्यकता पुरा गर्न आइरनले मद्दत गर्छ । आइरनको अभावमा शरीर थाकेको र सुस्त अवस्थामा रहन्छ ।
यदि महिलाहरुले आफ्नो जीवनशैलीमा यी ७ परिवर्तन ल्याए भने निश्चितरुपमा उनीहरुको शरीरमा कहिल्यै पनि आइरनको कमि हुँनेछैन ।
के हुन् त यी ७ परिवर्तन ?
Topics #कारण #थकाई
Don't Miss it कुन राम्रो नर्मल डेलिभरी र सिजेरियन डेलिभरीमा ?
Up Next कसरी हटाउने नाकको ब्ल्याक हेड्स ?